Tag: Nchọgharị nchọgharị | Martech Zone
Mkpado: browserma Ọkwa nchọgharị
Anyị nwere nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ ọdịnaya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụ ọ bụla m gụrụ na ahịa ọdịnaya metụtara ịnweta ndị ọbịa ọhụụ, iru ndị na-ege ntị ọhụụ, na itinye ego na ọwa mgbasa ozi na-apụta. Ndị a niile bụ atụmatụ nnweta. Inweta ndị ahịa bụ ụzọ dị nwayọ nwayọ, nke kacha sie ike, ma dịkwa oke ọnụ nke ịba ụba ego n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụdị ngwaahịa ọ bụla. Gini mere eziokwu a ji furu efu na azum ahia ahia? Ọ dị ihe dị ka 50% mfe